Al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday xero ciidan oo ku taala duleedka magaalada kismaayo – STAR FM SOMALIA
In ka badan 10-askari ayaa lagu dilay dagaal xalay saqdii dhexe ka dhacay xaruntii Akadeemiyada ee duleedka Kismaayo, halkaasoo saldhig u ahaa Ciidamada Daraawiishta Maamulka Jubbaland.
Dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xerada, waxaana halkaas ka dhacay dagaal socday muddo saddex saacadood.
Al-Shabaab ayaa sheegatay in weerarkaas ay ku dishay ilaa 17 askari, isla markaana hub iyo saanad ku qabsatay dagaalka.
Goob joogayaal ayaa sheegaya in khasaaraha dagaalka uu gaarayo labaatan dhimasho oo labada dhinac ah, iyadoo dhaawacyo badan ay jiraan.
Taliyaha Ciidamada Maamulka Jubbaland ayaa sheegay in weerarkaas ay kaga dhinteen todobo askari, halka Shabaab kaga dileen tobaneeyo dagaalyahan, waxaa uu beeniyay in xerada ay la wareegeen Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in ciidamada ay iska difaaceen weerarka lagu soo qaaday, isla markaana Shabaabka ay doonayeen sidii weerarkii Leego oo kale.
Al-Shabaab ayaa muddooyinkii u dambeeyay weeraro ku qaadayay xeryaha ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.